FAHAMAIZAN’NY KIANJAN’NY KANTO : « Mitohy hatrany ny antsojay mihatra amin’ny vondrona Mapar »
Nanao rodobe nidina ifotony teny amin’ny kianjan’ny Kanto etsy Mahamasina ireo delegasionina avy amin’ny vondrona Mapar nahita ireo solombavam-bahoaka afak’omaly. 14 juillet 2017
Nijery ny fahavoazana nahazo an’ny Depiote namany, Rossy izy ireo tamin’izany no sady nitondra ny teny fankaherezana ho azy ihany koa.
Lasibatra hatrany ireo olom-boafidy avy amin’ny vondrona Mapar na eto Antananarivo io na hatrany amin’ny Faritra, araka ny fanambarana nataon’ny Depiote Razanamahasoa Christine nandritra ny fidinana ifotony nataony teny an-toerana afak’omaly. “Mitohy hatrany ny antsojay mahazo ny Depiote Mapar anisany efa tratra tamin’izany ny Solombavambahoaka Lanto Rakotomanga, ny senatera Lylison de Réne, ny minisitra teo aloha Augustin Andriamananoro dia izao indray anjaran’i Rossy”, hoy hatrany ny fanazavany.
Ireo delegasionina avy amin’ny Mapar tonga teny an-toerana dia samy nanamarika fa tsy tongatonga ho azy iny zava-nitranga iny ary tsy mitovy amin’ny fahamaizana tsy nahy rehetra fa nisy tanjona tiana hotratrarina tao. Nanamafy izany i Rossy izay nilaza fa “tsy tongatonga ho azy iny zava-niseho iny izay nifanandrify indrindra tamin’ireny korontana niseho teto Antananarivo, ny faran’ny herinandro lasa teo iny”.
“Nanao fety tao amin’ny kianjan’ny kanto izahay ho fanaovam-beloma ny namany hody any ivelany, tokony ho tamin’ny 3 ora maraina no rava ny korana ary nasaiko nody avokoa ny mpiasa rehetra mba hialana amin’ny mety hisian’ny fanendrikendrehana raha sendra hisy savorovoro eny Mahamasina nandritra iny hetsika nataon’ny antoko TIM iny”, hoy hatrany ny depiote Paulbert Rahasimanana na Rossy nanazava. Notsiandrian’ity farany ihany koa fa “anisany fomba fiady kanosa hoentina hanakanana ny filona Andry Rajoelina tsy hilatsaka hofidiana filoham-pirenena amin’ny 2018 avokoa izao antsojay rehetra mahazo ny Mapar izao”. Amin’ny maha mpanakanto fatan-daza azy anefa dia nilaza ny tenany fa tsy hataony hampihemotra azy velively ny sompatra izay nihatra taminy.
Afak’omaly no nandraisany ireo namany, ireo mpankafy azy teny Mahamasina ary nanomezan’ireto farany teny fankaherezana tsy fanampiana ho azy. Efa mandeha ny fanadihadiana mahakasika iny raharaha iny, hatreto mbola tsy manana olona ahiahiana ho tompon’antoka i Rossy.
Miantso ny Filoha Andry Rajoelina hilatsaka hofidiana
Hatreto mbola tsy nisy nipika ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina amin’ny mety hilatsahany na tsia ho isan’ireo kandida ho filoham-pirenena amin’ny 2018. Ireo mpiara-dia aminy anefa efa samy manipy teny sy mandrisika mafy azy ho isan’ireo fidiana ho filoham-pirenena. Anisan’izany ireo fikambanana tanora “pro Andry Rajoelina” tany Toliara sy ny solombahavambahoaka Mapar. Ny depiote Naivo Raholdina ohatra dia efa nanao antso avo mihitsy amin’ny tokony hilatsahan’ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Nilaza izy fa ity farany ihany no mahavita azy no sady efa nahavita be teto amin’ny firenena ka mendrika raha hotohizany ny asa efa natombony nandritra ny naha filohan’ny tetezamita azy. Tsy dia nandresana feo intsony anefa ny filoha Andry Rajoelina tato ho ato izay heverina ho efa mikonona ny fifidianana ho avy.